သီအိုရီပျက်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ေ အာ င်ဝေး- ရ န် ကု န် ချီကျောင်းသား သ ပိ တ် တ ပ် ကြီးဘွဲ့့ (၂)
ဝါကျဖြူ - ညနှုတ်​ခမ်းဖျား​ပေါ်က ကွဲအက်​​နေ​သောလူများ
ရန်လင်းအောင် - ပြောဇာတ် - ၆
အဖေမရှိပဲ ၀မ်းဝရင် ၀ကြမှာပေါ့….
အမေမရှိပဲ ခါးလှရင် လှကြမှာပဲလေ….
နိုင်ငံခြားကို နေ့ချင်းပြန်ခရီး ကိုယ်ပိုင်လေယဉ်စီးပြီး
ရှော့ပင်ထွက် ပါတီတက်လို့ရသေးတာပဲ မဟုတ်လား….
ကိုယ်ပိုင်တွေးတောမှု သီအိုရီအရ ပြောရရင်
အဖေက သမီးနဲ့ သားကို
ကျောင်းမသွားခင် ဘာကျွေးလိုက်ရမလဲလို့ တွေးပြီး
ကျောင်းကို ဘယ်အ၀တ်ဝတ်ပေးလိုက်ရမလဲလို့ တွေးတယ်….
အများစုတွေးခေါ်မှု သီအိုရီအရ ပြောရရင်တော့
အဖေနဲ့ အမေစုံမှ ၀မ်းဝပြီး ခါးလှတတ်ကြတယ်တဲ့….
လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်နိုင်မယ်တဲ့ မဟုတ်လား
ဒီကနေ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ မိသားစုတွေမှာတော့
ခေါင်းခါး ခြေလက် တကိုယ်လုံးလှုပ်ရုံတင်မကဘူး
သူတို့ဘ၀တွေမှာ မိစုံဖစုံရှိကြပါလျှက်နဲ့ ၀မ်းမ၀ ခါးမလှနိုင်ကြရှာဘူး….
ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တွေးတောကြရမှာလဲ
အဲဒီမှာတင် သီအိုရီက ပျက်တော့တာပဲ
သီအိုရီပျက်ဆို တိုင်းပြည်ကလည်း ပျက်နေတာကြာပြီကိုး……။